Sunday March 29, 2020 - 15:16:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska guud ee ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa lagu sheegay in si KMG ah albaabada loo laabay xerada Xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada shisheeye uga suganyihiin dalka Soomaaliya.
Hoggaanka AMISOM ayaa sheegay in muddo 30 maalmood ah aan lageli karin lagana bixi karin Xalane sababa laxiriira cabsi laga qabo in cudurka Carona Virus uu ku dhax faafo xerada uuna laayo askarta iyo saraakiisha ku sugan.
Xayiraadan waxay saameynaysaa dhaq dhaqaaqyadii ay sameyn jireen diblumaasiyiinta shisheeye ee Xalane dhax deggan, shaqaalaha ajaanibta ee Hotellada iyo maqaayada ku dhax leh, dhammaan gaadiidkii saadka udaabuli jiray saldhigyada AMISOM halka ay baaritaanno adag wajahayaan saraakiisha Ururka Midowga Afrika ee kormeerka ku imaanaya xerada.
Warka kasoo baxay hoggaanka soo duulayaasha AMISOM ayaa lagu sheegay in tallaabooyinka la qaaday kadib markii uu sare ukacay halista Carona Virus, jimcihii lasoo dhaafay Q.Midoobay ayaa ku dhawaaqday in mid kamida shaqaalaheeda ku sugan laga helay caabuqa Covid19 balse ma sheegin dalka uu kasoo jeedo ruuxa ajnabiga ah ee cudurka laga helay.
Cudurrada halista ah sida Aidis-ka iyo Carona waxaa dalka Soomaaliya soo geliyay dad ajaanib ah kuwaas oo doonaya in ay dhibaato daran dhaxalsiiyaan shacabka Soomaaliyeed.
Qarax gaari xamuul ah looga gubay ciidamada AMISOM oo ka dhacay deegaanka Shalaambood.
Dowladda Turkiga oo Bandow adag soo rogtay Maalmaha Ciiddul Fidriga.
AMISOM oo xaqiijisay in ciidamada Itoobiya ay soo rideen diyaaraddii Bardaale ku burburtay.
Saraakiil lagu dilay Muqdisho iyo AMISOM oo lagu weeraray Sh.dhexe.
Dowladda Kenya oo xirtay Suuqa Xoolaha Gaarisa iyo Xerada Dhadhaab.
Ciidamada Itoobiya oo diyaarad rakaab ah kusoo riday degmada Bardaale.
Dad Ajaanib ah oo la sheegay in ay ku dhinteen duqeyntii xerada Xalane.
Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda weerar lagu qaaday Xerada Xalane.